Newsenepal:: निर्मला हत्या योजनाबद्ध कि आकस्मिक ? प्रहरी भन्छ– हत्यारा उम्किँदैन
निर्मला हत्या योजनाबद्ध कि आकस्मिक ? प्रहरी भन्छ– हत्यारा उम्किँदैन
कञ्चनपुर । कञ्चनपुरको भीमदत्तनगर–२ की १३ वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या अनुसन्धानमा ५० जनाको डीएनए परीक्षण भइसकेको छ । प्रहरी स्रोतका अनुसार अझै केहीको नमुना संकलन गर्ने तयारी छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका डीएसपी कृष्णराज ओझालाई अनुसन्धान अधिकृत बनाएर जारी अनुसन्धान सकारात्मक पाटोमा अघि बढेको प्रहरी बताउँछ । दैनिक २–३ शंकास्पदलाई ल्याएर सोधपुछ गर्ने काम भइरहेको बताइएको छ । बलात्कारपछि हत्या भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि हत्यारा सार्वजनिक गर्न नसक्दा प्रहरी आलोचनाको तारो बनेको छ । कञ्चनपुर प्रहरीका एसपी कुवेरसिंह कडायत अनुसन्धान सकारात्मक पाटोमा अघि बढेको र ढिलोचाँडो परिणाम आउने बताउँछन् । कडायतले भने, ‘‘पछिल्लो समय स्थानीय पनि प्रहरीलाई सूचना संकलनमा सहयोग गरिरहेका छन् । विगतभन्दा प्रहरीप्रति स्थानीयको विश्वास बढ्दै गएको छ । यसले अनुसन्धान सहज हुँदै गएको छ ।’’
उनले थपे, ‘‘विभिन्न कोणबाट अनुसन्धान जारी छ । घटना उखुबारीमै भएको यकिन गरेका छौं । सूचना संकलन तिव्र बनाएका छौं । समय त तोक्न सकिन्न, तर हत्यारालाई उम्किन दिँदैनौ ।’’ अनुसन्धानमा लापरवाही गरेको भन्दै तत्कालीन कञ्चनपुर प्रहरीका एसपी दिल्लीराज विष्टलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएपछि एसपी कडायतले कञ्चनपुरको नेतृत्व सम्हालेका हुन् । कडायतको बुझाइमा निर्मला बलात्कार र हत्या योजनाबद्ध नभएर आकस्मिक रुपमा घटेको घटना हो । उनले भने, ‘‘घटनास्थल, साउन १० गतेको अवस्था सबैलाई अध्ययन गर्दा बाटोमा ढुकेर कसैले घटना गरेको हो जस्तो देखिन्न ।’’
अनुसन्धान साँघुरिँदै गएको प्रहरी अधिकारीले बताउँदै आएका छन् । केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो (सिआईबी) र कञ्चनपुर प्रहरीको टोलीले घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको छ । अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी अधिकारीले भने, ‘‘अनुसन्धान त पेचिलो छ नै । तथ्य केलाउने प्रयास गर्दैछौं तर अनुसन्धान विगतको तुलनमा केही सहज हुँदै गएको छ ।’’
सेनामाथिको निगरानी कायमै
प्रहरीले साउन १० गते बाहिर निस्किएका सेनाका व्यक्तिमाथि समेत निगरानी कायमै राखेको छ । एक अधिकारीका अनुसार सेनामाथि अनुसन्धान गर्न जटिलताहरु भने छन् । उनले भने, ‘‘उनीहरुले नै घटना गराएका हुन् भन्ने कुनै आधार त छैनन् । तर केहीमाथि निगरानी बढाएका छौं ।’’
स्रोतका अनुसार कतिपयले सेनामाथि समेत अनुसन्धान गरिनुपर्ने बताएपछि साउन १० गते ब्यारेकबाट बाहिरिएका सेनाको विवरण मागिएको थियो । योबाहेक प्रहरीले घटनापछि शंकास्पद व्यवहार देखाउँदै आएका, गायब भएकाहरु र आन्दोलन चर्किंदै गएपछि नदेखिएका शंकास्पद व्यक्तिहरुमाथि पनि निगरानी बढाएको छ । ‘‘घटनाक्रम केलाउँदै लगेका छौं । अनुसन्धानमा कुनै कसर बाँकी राखेका छैनौं । हजारौंबाट केलाउँदा केलाउँदै १०–१२ जनासम्म पुगेका छौं,’’ अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारीले भने ।
घटना एकजनाबाटै ?
प्रहरी अधिकारीका अनुसार निर्मलाको बलात्कार र हत्यामा एकजनाको मात्रै संलग्नता हुनसक्ने सम्भावना छ । अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीको बुझाइमा एकजनाबाट मात्रै भएको घटनामा प्रमाणको अभाव रहेको अवस्थामा अभियुक्तको पहिचान गर्न निकै गाह्रो हुन्छ ।
‘‘निर्मलाले सामाजिक सञ्जाल, मोबाइल प्रयोग गर्थिनन् । प्रयोग गर्ने गरेको भए अनुसन्धान निकै सहज हुन्थ्यो । तरपनि हामीले भ्याएसम्मका प्रविधिको प्रयोग गरेका छौं । अचूक प्रमाणको अभावमा म्यानुअल अनुसन्धानमै हाम्रो जोड छ,’’ प्रहरीको भनाइ छ, “एकभन्दा बढी व्यक्तिको संलग्नता भएको भए केही न केही कुरा पक्कै निस्किन्छ । त्यसैले यो घटनामा एकजनाको मात्रै संलग्नता हो कि भन्ने लागेको छ ।’’
186201/29/2019 @ 12:07
ktm वरपरका खबरहरु
पब्जी प्रतिबन्ध नलगाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
अवैध रुपमा संकलन गरिरहेको सुन सहित पक्राउ
कम्पनी रजिष्ट्रारमा चार महिनादेखि अनलाइन कारोबार, तर सेवाग्राहीको छैन आकर्षण
मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णयहरु सार्वजनिकः यस्ता छन् १२ निर्णय
चौधरी ग्रुपको उद्योगमा शक्तिशाली बम विस्फोट
त्रिवि नतिजामा गम्भीर त्रुटि , ४० पूर्णाङकमा ४२ नम्बर आयो !
ठगी गरेको आरोपमा ओखलढुंगा पोकलीका मिलन विष्ट पक्राउ !
अस्ट्रेलियामा कडा आप्रवासन नीतिको घोषणा हुँदै, अध्ययन र कामका लागि गएका नेपालीहरूलाई तनाब !
बालुवाटारको सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरणमा मुछिएका नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलको यस्तो जवाफ !
मेयरले भने : २५ मिटर चाँडै भत्काउनुस
Newsenepal द्वारा लिखित अन्य खबरहरु
चुनाव हारेकालाई सांसद (मन्त्री ?)– बाबुराम भट्टराई
मेयर शाक्यलाई सोल्टी होटलको आइसोलेसनमा बस्दाको खर्चको विवरण पेश गर्न अनुरोध
पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर १ हजार २ सय ४६ जनामा कोभिड १९ संक्रमण पुष्टि
जोर बिजोर कायम नै तर व्यापार व्यवसाय बार अनुसार खोल्ने भनिएको हटाइयो
पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर १ हजार ५ सय ३९ जनामा कोभिड १९ संक्रमण पुष्टि
सिन्धुपाल्चोकको राम्चे केन्द्र बिन्दु बनाएर भुकप्पको पराकम्पन
नेपाल सरकारका प्रवक्ताले लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात, आन्तरिक उडान र होटलहरु असोज १ गतेबाट नै संचालनमा आउने घोषण
निमित्त कार्यकारी प्रमुखमा लेखनाथ कोइराला नियुक्त
डा. युवराज खतिवडालाई मन्त्री सरहकै नियुक्ती
पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर १ हजार ४ सय ५९ जनामा कोभिड १९ संक्रमण पुष्टि
नेपाली टाईप गर्नको लागि (Press Ctrl+g to toggle between English and Nepali)
Address: Kalanki -14, Kathmandu, Nepal
Editor in Chief: Nirmal Gaire
Copyright @ Newsenepal 2016
सूचना विभाग दर्ता नम्बर: ३४३ /२०७३ -७४